Fitantanana ny firenena: miisa 22 ireo minisitra handrafitra ny governemanta | NewsMada
Fitantanana ny firenena: miisa 22 ireo minisitra handrafitra ny governemanta
Mba tsy ho be tsy andraofana. Hiavaka tsy tahaka ny teo aloha rehetra hatramin’izay ny ho firafitry ny governemanta hotarihin’ny praiminisitra vaovao ho avy eo, araka ny loharanom-baovao. Miisa 22 ireo minisitra handrafitra izany fa tsy ho 30 mahery, tahaka ny nataon’ny fitondrana nifandimby teto. Hisy ny fampitambarana na fanakambanana minisitera roa na telo ao anatin’izany governemanta izany. Mbola hijanona amin’ny toerany kosa anefa ny departemanta samihafa amin’ireny minisitera teo aloha ireny fa ho eo ambany fiahian’ny minisitra iray ihany.
Praiminisitra miainga amin’ny maro anisa…
Tombanana fa tafiditra amin’ny resaka fitsitsiana aloha izao mety ho firafiny izao. Mety ahitana taratra koa anefa fa hanana solontena ao anatin’izany ny faritra na koa ny faritany teo aloha ka sady ho mpiahy izany ireo minisitra hotendrena ireo.
Ankoatra izany, mety hotendren’ny filoha Rajoelina andro vitsy aorian’ny fametrahana azy amin’ny fomba ofisialy ny asabotsy izao ny ho praiminisitra lehiben’ny governemanta. Miainga amin’ny maro anisa eny anivon’ny Antenimieram-pirenena amin’ny alalan’ny Mapar izany. Hitohy amin’ny fanendrena ireo minisitra izany aorian’ny fankatoavan’ny filoham-pirenena ireo anarana entina eo aminy rehefa avy hifampidinihany amin’ny praiminisitra vaovao eo.
Hitakiana vokatra haingana anatin’ny fotoana fohy
Ilana ekipa hitakiana vokatra sy haingana ato anatin’ny fotoana fohy ary manana fahavononana sy finiavana ho amin’ny fanatanterahana ireo vinan’ny filoha izany governemanta izany. Tsy tokony hisehoan’ny andrankandrana intsony ny fitantanana ny firenena manoloana izao fahantrana lalina iainan’ny vahoaka izao.
Midika izany fa efa tsy ho ela intsony ny hiaingan’ny firenena ho amin’ny fampandrosoana, manoloana izao hanendrena tsy ho ela ny praiminisitra sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta izao.